Ojiji nke 3-akụkụ technology na-ebe a na-eji na-egwu ya edekọ ụwa. Android Ịgba Cha Cha ahịa bụ ama-ewu ewu n'etiti ya Fans na mmepe na-mgbe na-atụ anya na-eje ozi ndị ọrụ na ihe ọhụrụ na-mma! The play ahịa na-kwajuru na a ọnụ ọgụgụ nke 3-akụkụ kediegwu egwuregwu na fọrọ nke nta niile Genres na e nwere ike isi gị a Ịgba Cha Cha maara ahụ! Ọ ga-abụ na ngwa ngwa racing egwuregwu ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme ibé egwuregwu, na atọ akụkụ egwuregwu nwere onwe ha amara nke ga-anapụtakwa gị n'ime a kpamkpam dị iche iche n'ụwa. Ebe a bụ obere ndepụta nke ụfọdụ ndị kasị mma atọ akụkụ egwuregwu na dị oké ọnụ ahịa na-agbalị:
Orbitarium bụ a atọ akụkụ egwuregwu melite ke omimi gburugburu ebe obibi na ebe ị nwere ike ịga njem na gị spaceship. Ị nwere ike nāṅaghari galaxy, agha kwụsịrị iro, na-anakọta ihe. Magburu onwe-emeputa na ezi akara atụmatụ, Orbitarium bụ egwuregwu uru na-akpọ!
2.Hero Nka Z
Ị dị ka na-alụ ọgụ egwuregwu? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ dike Nka Z bụ nke zuru okè atọ akụkụ egwuregwu maka gị! Ịbụ atọ akụkụ, egwuregwu ana achi achi ndị magburu onwe onye ọrụ ahụmahụ ma na-enye a ọnụ ọgụgụ nke na-alụ ọgụ ngwá agha inye a ọzọ kwesịrị obi na-adị. Ị nwere ike ma na-ahọrọ na-alụ ọgụ naanị ma ọ bụ na-alụ ọgụ na iche iche. Ị nwere ike dị ọtụtụ dị ka 50 enyi n'ihi na-alụ ọgụ n'elu iro.
Ọ bụrụ na racing bụ gị niche, mgbe ahụ, ị ​​na-maa aga a n'anya ókè racing atọ akụkụ egwuregwu. The naanị ebumnuche nke egwuregwu bụ inye ndị ọkpụkpọ ihe dị ịtụnanya na ezi uche racing ahụmahụ. O nwere ike na-eche na nchegbu, mkpali na obi ụtọ nke kacha ụgbọala racing egwuregwu site na nke a egwuregwu.
Mee gị onwe gị nnukwu ụlọ na ihe niile ị na-eche na site na nke a egwuregwu.
5.Duck ịchụ nta 3D
Duck ịchụ nta 3D bụ a zuru okè egwuregwu n'ihi na ndị na-atụ anya ka na-egbu oge. O doro anya na, ị ga-gbaa dị ka ọtụtụ ducks dị ka omume. N'ihi na égbè, ị ga-nyere na a ọnụ ọgụgụ nke ngwá agha. Magburu onwe ndịna-emeputa na mfe égbè akara, na-eme ka egwuregwu uru na-akpọ.
6.Long onye agha Commando: Rush Agha
Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu ihe kacha ọgụ egwuregwu na magburu onwe ndịna-emeputa na a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ na atụmatụ, mgbe ahụ, Long onye agha Commando bụ nke zuru okè oke maka gị! Ị ga na-alụ ọgụ kwụsịrị-eyi ọha egwu ma na-eme nke dị iche iche dị mkpa ọzọ. Ọ bụrụ na ihe ndị dị otú mmasị gị, mgbe ahụ Long onye agha Commando bụ egwuregwu ị mgbe niile na-achọ!
7.Horse Racing Ịme anwansị 3D
Ịnyịnya Racing Ịme anwansị 3D bụ egwuregwu niile egwuregwu ndị hụrụ si n'ebe. Na zuru okè ndịna-emeputa na nsonaazụ ụda, ihe ị ga-enweta kacha ịnyịnya obi ụtọ mgbe! Egwuregwu-enye gị ohere na-akụkụ dị iche iche agbụrụ na-niile i nwere ime bụ, nọkwasị gị ịnyịnya ngwa ngwa karịa gị niile na-emegide.
8.Rage nke asaa n'oké osimiri
Ọnụma nke asaa n'oké osimiri bụ ihe adventurous egwuregwu na elu mkpebi ndịna-emeputa na zuru okè ibé. Ị bụ onye nwe nke ụgbọ mmiri na ị ga-azọpụta ya si oké osimiri na ebili mmiri na My Chemical Romance. Ị nwere ike ịgbanwe gị ụgbọ mmiri nlereanya na-ahụ akụ zoro ezo wee lie miri n'ime oké osimiri.
Google Play ranking: Ọ dịghị fim ma.
Hyper prism bụ a atọ akụkụ egwuregwu ebe ị aghaghị inyere ndị isi agwa ịgafe dị iche iche na-etoju Site na imeri nsogbu na ọnyà.
10.Landlord 3D: Ịlanahụ Island
Nwe ulo 3D bụ a ike na-egwu egwuregwu na a ọnụ ọgụgụ nke ihe ịma aka. Ihe mgbaru ọsọ nke ebumnuche bụ na-adị ndụ n'àgwàetiti nke bụ n'ụlọ a ọnụ ọgụgụ nke ịma aka gụnyere atụ ụjọ na ụmụ anụmanụ. N'etiti alụ ọgụ anya ụmụ anụmanụ ndị a, ị ga-anakọta ego na ndị ọzọ na Mwekọta gaba na-esonụ larịị.
E wezụga ha, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ atọ akụkụ egwuregwu dị na android ahịa. Egwuregwu ndị a na nwere ike mfe arụnyere na gị android smart ekwentị ma na-egwuri mgbe ọ bụla ị chọrọ ka!
> Resource> emulator> Top 10 3D Android Games Worth ebre